दम्पतीको सम्बन्ध प्रेमिल र विश्वासले भरिपूर्ण हुन जरुरी ! « Nepal Bahas
दम्पतीको सम्बन्ध प्रेमिल र विश्वासले भरिपूर्ण हुन जरुरी !
प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०७८, आईतवार २३:०२
२४ साउन, काठमाडाैं । मान्छेहरू सही भन्छन्, ‘प्रेम प्राप्ती होइन, त्याग हो । प्रेम धुँवा हो, नसा हो, आभाष हो, भगवान् हो, सैतान हो । प्रेमले मान्छेलाई सबबाट अलग बनाइदिन्छ । ठूलो भिडमा पनि एक्लो भएको आभाष गराइदिन्छ । यतिमात्र होइन, प्रेमले स्वयम्लाई कमजोर बनाइदिन्छ त कहिले निडर बनाइदिन्छ । संसार ठप्प रोकिएझै महसुस भैदिन्छ, शब्दहरू बेस्सरी हड्वडाई दिन्छन्, मुटुको धड्कन तेज भैदिन्छ ।
जब त्यहि प्रेम दाम्पत्य जीवनमा बाधिन्छ अनि कसरी सुखमय बनाउने ? सोच्न आवश्यक पर्छ । किनभने कतिपय दाम्पत्य सम्बन्ध त्यति प्रेमिल हुँदैन । उनीहरुबीच विश्वास र प्रेमको अभाव हुन्छ । त्यही कारण यस्तो दम्पतीबीच मनमुटाव एवं कलह भइरहन्छ ।
यसैगरी दम्पतीको झगडाले बालबच्चासँगै श्रीमानलाई हरेक कामकाजमा दुःख हुन्छ । एकपछि अर्को गर्दै तनाव सृजना हुन्छ । घरको माहौल बिग्रिन्छ अनि घर वास्तवमा घर जस्तो रहँदैन ।
त्यसैले दम्पतीबीचको सम्बन्ध प्रेमिल र विश्वासले भरिपूर्ण हुन जरुरी हुन्छ । जब दम्पती खुसी हुन्छन्, त्यसको सकारात्मक प्रभाव उनीहरुको घर परिवारमा पर्छ । यसले घरलाई नै स्वर्ग बनाउँछ ।
यसका लागि भौतिक सुख सुविधा, सम्पति महत्वपूर्ण हुँदैन । धनीमानी परिवारमा पनि दम्पतीबीच कलह र असमझदारी हुन्छ । किनभने यो आर्थिक, भौतिक भन्दा पनि भावनात्मक कुरा हो ।
श्रीमान र श्रीमतीबीचको सम्बन्ध सुमधुर भइरहनुमा उनीहरुको भावनात्मक स्थितिले भूमिका खेल्छ । उनीहरुको बोली–व्यवहार, आचरण, सोच चिन्तन, समझदारी आदिले दाम्पत्य जीवनलाई सुखमय बनाइरहन्छ । अतः यसका लागि श्रीमान र श्रीमती दुवै एकअर्काको परिपूरक हुनुपर्छ ।
दाम्पत्य जीवनलाई सुखमय बनाइरहनका लागि पहिलो शर्त हो, समझदारी । घर व्यवहार चलाउने कुरामा कतिपय मतभेद हुनसक्छ । व्यवहारिक कुराहरुमा उनीहरुले एकअर्कालाई साथ दिनुपर्छ । एकअर्काको काँध थाप्नुपर्छ ।
त्यसैले त जीवनमा जन्म र मृत्यु त निश्चित छ जहिले भएनि हुन्छ । तर प्रेम कसैको नसिवमा हुन्छ त कसैको हुँदैन । प्रेमले बारबार दुखाउला तर हजारबार हसाउँछ, जिउन सिकाउँछ । सयौं परीक्षाहरू लिन्छ तर हर परीक्षामा जिताउँछ ।
प्रेमले असल सम्बन्ध निभाउन सिकाउँछ । श्रीमान र श्रीमतीबीच प्रेम प्राप्ती हो, मिठो सम्बन्ध हो, खुशी हो, भरोसा हो, विश्वास हो ।
दुई दिन पैदल हिँडेर चामल किन्न गएकी जुनकला आँशु झार्दै घर फर्किन्
देउवा : संसदीय राजनीतिका ‘नालायक नेता’
वर्तमान राजनीति र माधव नेपालको रुन्चे हाँसो